यस्ता छन् केटीले प्रेमीसँग भन्नै नहुने ४ कुराहरु, जानी राखौ
अगस्ट 21, 2019 अगस्ट 21, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments	केटी, प्रेम
प्रेम अपनत्वको भाव हो । “प्रेम” मजबूत स्नेहको एक भावना र व्यक्तिगत लगाव हो । हाम्रा सबै सम्बन्धहरुमा एक प्रकारका सीमा पनि हुन्छन् । सीमाहरुको ख्याल राखिएन भने सम्बन्धमा समस्या पनि आउन सक्छ । कतिपय युवतीहरुले भावनामा बगेर आफ्ना प्रेमीसँग सम्पूर्ण कुरा खोल्छन् । त्यसको असर नकारात्मक पर्ने गर्छ । केही कुराहरु युवतीहरुले आफ्ना प्रेमीसँग खोल्नै नहुने पनि छन् । प्रेमीहसँग घुलमिल हुँदै जाँदा भावनामा बगेर सम्पूर्ण कुरा खोल्ने बानी राम्रो होइन । खासगरी यि कुरामा युवतीहरु सचेत हुनुपर्छ । यस्ता छन् केटीहरुले प्रेमीसँग भन्नै नहुने ४ कुराहरु,जानी राखौ ।
१. साथीको गोप्य कुरा
यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । कहिले पनि आफ्नो ब्वाइफ्रेण्डलाई आफ्ना साथीहरुको गोप्यकुरा सुनाउनु हुँदैन ’cause साथीहरुले आफ्ना गोप्यकुरा विश्वास गरेर भनेका हुन्छन् ।
पासवर्डको कुरामा निक्कै सचेत हुनुपर्छ । कतिपय युवतीहरुले भावनामा आएर आफ्ना पासवर्ड प्रेमीसँग शेयर गर्छन् । तर त्यो घातक हुन सक्छ । त्यसैले पासवर्डहरु कहिले पनि भन्नु हुँदैन ।
३. परिवारका कुरा
आफ्नो परिवार भित्रका कुरा आफ्नो मनमा राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ । किन भने कतिपय अवस्थामा भावनामा आएर प्रेमीसँग परिवारभित्रका कुरा शेयर गर्दा त्यसको परिणाम नकारात्मक हुन सक्ने खतरा हुन्छ ।
४. विगतको विषयमा
यदि तपाइँ आफ्नो अघिल्लो सम्बन्ध वा कुनै ब्यक्तिगत कुरा गर्नु हुन्छ भने प्रेमीलाई सबैकुरा भन्नु राम्रो होइन । बताइहाले पनि पुरै कुरा बताउनु हुँदैन । यस्ता कुरा शेयर गर्दा पनि सम्बन्ध धरापमा पर्न सक्छ ।
← चायाँबाट बच्ने उपाय र यसको घरेलु उपचार
वर्तमान समयमा आयुर्वेदिक औषधिको महत्व →
फ्रेवुअरी 14, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0
जनवरी 28, 2017 नोभेम्बर 2, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0
नोभेम्बर 30, 2018 नोभेम्बर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक	2
नेपालका रमन म्याग्सेसे पुरस्कार बिजेताहरु